Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Gumaysiga Lagu Jabiyay oo Gobolka Qoraxay Kadhacay.
Dagaalo Gumaysiga Lagu Jabiyay oo Gobolka Qoraxay Kadhacay.
Posted by ONA Admin	/ August 24, 2015
Wararka ka imanaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa ka warbixinaya dagaaladii ugu dambeeyay ee dhexmaray N/hurayaasha Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) ee hadh iyo habeenba utaagan soodhicinta ciida Ogadenya ee xaq darrada lagu haysto iyo ciidanka maxaysatada ah ee Gumaysiga Itoobiya.
Dagaaladan ugu dambeeyay oo kadhacay Gobolka Qoraxay ayaa ahaa kuwo ciidanka gumaysiga lagaga laayay
askar badan oo kamid ah huubada ay wadanka soo dhoobeen waxaana lagu gaadhsiiyay khasaare laxaad leh ciidanka cadawga. Markay taariikhdu ahayd 13/8/2015 Barinka-balaale oo dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal CWXO iyo kuwa Gumaysiga Itoobiya ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhanka kale waxaa maalinimadii Sabtida ahayd ooy taariikhdu kubeegnayd 22/8/2015 Kalyaal oo dagmada Qabridahare katirsan dagaal culus oo CWXO iyo kuwa saamalaluudka ah ee Gumaysiga Itoobiya kudhex maray
ayaa ciidanka gumaysiga lagaga wanjalay askar aad ubadan oon tiradooda rasmiga ah wali lahelin.
CWXO ayaa dagaalo aad uqorshaysan kuqaada xeryaha iyo fadhiisimaha uu cadawga sida gardarrada ah uga samaystay wadanka Ogadenya. Dagaaladan oo baryahan si xawli ah kusocda ayaa cadawga khasaare balaadhan lagu gaadhsiiyay.